Melody: mutambi wemimhanzi wakanyorwa mumutauro weVala | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchida kuyedza chiitiko chitsva neimwe imwe mimhanzi inoridza, unogona zviedze nerwiyo. Iyo yakavhurika sosi uye yakanyorwa muVala programming mutauro. Kana iwe wanga usingazive, Vala mutauro wazvino uno wakagadzirwa kuti ufanane nehunhu hwedzimwe mitauro yazvino, uve nemutengo wakaderera wezvinodiwa, wakanangidzirwa pazvinhu, uye pasina zvimwe zvinodiwa munguva yekumhanya sevamwe.
Nekukurumidza chaizvo, ndinodawo kuwedzera kuti pane zvishoma kupokana neVala uye chirongwa cheGNOME. Icho chikonzero ndechekuti Vala mukwikwidzi weMono. Iwe unotoziva kuti Mono chikamu cheGNOME kernel, asi vamwe vevagadziri vacho vari kutofara kuti kutsiva kwaMono naVala. Vatsigiri vanoti ine kuita kukuru uye haigone kuvharirwa nemvumo yeMicrosoft seMono. Avo vasingazvide vanotaura kuti Vala haasati akura uye ane zvinyorwa zvidiki ...
Izvo zviri kutaurwa, kudzokera kuchirongwa cheMelody, kutaura kuti kutaridzika kwayo kunoratidzika kunge kwakanaka. Hairemi uye ine mabasa ese angabvunzwa neanoridza mimhanzi. Yakagadzirirwa iyo yekutangaOSOS distro, uye inowanikwa mune yako AppCenter kana uchifarira. Unogona kuiisa nekudzvanya kamwe chete zviri nyore. Asi kana iwe usina iyi distro, usanetseke, inogona kuiswa pane mamwe ma distros nenzira isiri yakaoma kunzwisisa.
Kuva nayo mune imwe distros, unogona kutarisa kana iri mumahofisi epamutemo e distro yako. Semuenzaniso, paArch Linux, vhezheni yazvino inowanikwa kubva kuArch User Repository (AUR). Uye iwe unogona kuumbiridza kubva kunobva kodhi kune chero imwe distro kana iwe uchida pasina zvakanyanya kuwanda dambudziko. Pamusoro peizvozvo, kana iwe usiri kuda kuomesa hupenyu hwako zvakawandisa, pane yepasirese Melody Flatpak package inowanikwa (zvinosuwisa, parizvino, hapana AppImage kana Snap).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Melody: mutambi wemimhanzi wakanyorwa mumutauro weVala
Ndinoita zvirinani kupfuura Lollypop. Yakanyatsokurudzirwa
Ndatenda! Ndiri kufara kuzvinzwa